India, Sri Lanka: Fetiben’ny Tempoly tany amin’ny andaniny sy ankilan’ny andilan-dranomasin’i Palk · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2018 4:33 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, 日本語, English
(Marihina fa tamin'ny 22 Aprily 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ireto ny sarin'ny fetiben'ny fiara tempoly ao Rakwana any Sri Lanka izay avy amin'ny ‘Irakuwanai’ Nirshan. Iray amin'ny singa ifantohan'ny fetibe ny fiara tempoly- “Ny fiaran'ny tempoly dia kalesy ampiasaina hitaterana ireo mpanompo ny andriamanitra Haindò. Matetika amin'ny andron'ny fetibe no itarihana ny fiara ary ahitana ireo olona marobe mitarika ny kalesy. “
Mamahana bilaogy momba ireo mpivarotra madinika izay mivarotra ny entany amin'ny fetibe tahaka itony i Surekha, ao Tamil Nadu, India manavatsava ny andilan-dranomasin'i Palk. Ahitana betsaka ny toekarena ao an-toerana tsara ny fetibe ara-pivavahana, toy ny fetiben'ny tempoly. Naka an-tsary ny fotoana niaraka tamin'ny tononkalo fohy amin'ny teny Tamòla izy. Noezahana natao ny fandikanteny teto.
Maminany ny hoavy ny boloky Tarrot
amin'ny feon'ny vavy antitra iray
avy amin'ny horonam-peo,
manonteny amin'ny tapa-damba mandrakotra
mitondra tsiky ilay fiara ,
raha ny mpivarotra eo amin'ny toerana
manaraka kosa miandry mpanjifa
efa zatra mividy ny lobaka Peter England.
Nividy akanjo avy taminy aho .
Fanoloran-tena eo noho eo sy fahalalana eo noho eo
eto androany, ary tsy hita rahampitso.
Kanefa dia tena toerana tsara ho an'ny fifaneraserana.
Nividy ny bokin'i Ilaiyaraja aho.
Ny fiandrasana ao ambadik'ireo tilikambo
fanantenana sy fanefana trosa.
Ny fanapotehana ireo tilikambo ireo
ao amin'ny tokantrano maro.
Nividy sev aho.
Nefa azo antoka fa tsy ho ahy izany!
Fa ho an'ny fanoloran-tenan'izy ireo ho amin'ny fiainana!!